Lapho ukuvunguza kwegolide kuwele futhi futhi (igxathu elilodwa ukusuka kumxhasi), phakathi ugongolo ngalunye nasemgqeni, kukhona ezimbili (2) Izinkanyezi ezi-5 (Izinkanyezi ezingama-36). Isamba siyizinkanyezi eziyi-18 + 36 + 1 noma ezingama-55. Izinkanyezi ezingama-55 zimelela izifundazwe zase-Afrika zamanje ezingama-54 kanye nezizukulwane zase-Afro emhlabeni jikelele.
Ngubani ozohlanganisa ukwakha i-United States of Africa. Kuvunguza kwegolide kunendawo "eadem mutata resurgo" enengxenye, okungukuthi okungahambisani nokufana kwesikhungo O, sobukhulu π kanye ne-angle π / 2. Ngakho-ke isondela endaweni yangempela ye-logarithmic nge-m echazwe ngu em / 2 = . Ngakho-ke i-polation equation. Ifulegi le-USOA libonisa ukuqashelwa okuqinile kwengxenye yaphezulu. Futhi umsebenzi ozovela kuwo, uzolingana nemithetho yendawo yonke.
E-DRCongo: UCovid-19 ubulawa nguProfessor Manda "USolwazi Manda Kizabi (osanda kuhlala eFrance), obehlala ePlateau des Professeurs e-University of Kinshasa, ushonile"